डाउनलोड अमीरात बेड़े FSX र P3D - Rikoooo
डाउनलोड 466 556
संग संगतता FSX भाप संस्करण र Prepar3D v3
नयाँ Airbus A319-15 एमिरेट्स कार्यकारी - अद्वितीय सेवा, निजी जेट। Rikoooo द्वारा बनावट
2D प्यानल मा प्रतीक सबै विमानहरु मा एफएमसी थपियो
भू हैंडलिंग प्रणाली थपियो
A380 लागि नयाँ भर्चुअल ककपिट (थमस रूथ देखि A340 कुलपति) -। अघिल्लो A380 कुलपति पनि बग्गीमा थियो र हवाइजहाज राम्ररी एपी मोडमा छैन नियन्त्रण गर्न सकिएन
जोडा एमिरेट्स ला Dodgers A380 लागि विशेष repaint
नयाँ 2D प्यानल र A380 लागि नयाँ गेज
A330 र A340 लागि भर्चुअल ककपिट सुधार
नयाँ HD प्यानल र B777 लागि नयाँ गेज
DLL msvcrxNUMX.dll को मुख्य फोल्डरमा थपियो FSX / P3D B777 सँग प्रदर्शन समस्या सच्याउन
नयाँ GPWS Boeing र Airbus सुनिन्छ
Auto-installer संस्करण १०..10
स्थिर धेरै त्रुटिहरू
को A2 को 380D प्यानल निश्चित, रेडियो धेरै सानो थियो।
स्थापनाले सन्तुलित Windows 8 र Prepar3D.
को कुलपति र A2X र A33X लागि 34D प्यानल मा एक एफएमसी थप्दै।
कुलपति मा A33X र A34X र नयाँ HD बनावट मा नयाँ कालो गेज।
Alrot द्वारा "विकसित कुलपति" B747 + एफएमसी + Autoland गेज लागि।
A2 को लागि Rikoooo द्वारा बनाईएको 380D प्यानल थप्नका लागी VC अनुकूलन FSX, धेरै बगहरू र बनावटहरू निश्चित, गियर गेज सहित गेजहरूको सिर्जना।
B777-XXX + को लागी एफएमसी थप्नका लागी ग्लास बनावटका लागि अनुकूलन (अल्फा च्यानल) Prepar3D.
राम्रो प्रदर्शन लागि DXT5 ढाँचामा बनावट को रूपान्तरण।
धेरै अन्य त्रुटिहरू फिक्स ...
संग अमीरात बेड़े v3.0 पूरा FSX SP2, एक्सेलेरेशन, FSX भाप संस्करण र Prepar3D v XX। एक असाधारण संकलनको निःशुल्क उपलब्ध छ। Rikoooo एकीकरण र एभिओनिक्स प्रणाली को कार्यक्षमता धेरै त्रुटिहरू फिक्सिंग सहित मा एक विशेष ध्यान दिइएको छ। यो छिटो विशेष Rikoooo देखि उपलब्ध छ, यो कहीं अवस्थित छैन।
यो प्याक अगस्ट 18, 2016 लागि रूपमा एमिरेट्स छिटो अनुरूप सबै विमानहरु समावेश छ।
हवाईजहाज उपलब्ध मेलोडीज इमिरेट्स:
केही गेज, विशेष मा Microsoft ® व्यक्तिहरूलाई राम्रो मिलाइएको लागि चुनिएको मोडेल आधारमा reworked गरिएको छ। प्रत्येक विमान इन्जिन को प्रकार आधारमा यसको आफ्नै व्यक्तिगत ध्वनि छ; जनरल इलेक्ट्रिक, रोल्स-रोयस ट्रेंट वा CFM अन्तर्राष्ट्रिय। तपाईं एक Boeing 777-200ER र 777-300 वा 777-300ER भिन्नता बनाउन उडान मोडेल जो तपाईंलाई वजन, आकार, आकृति र इन्जिन शक्ति भित्र कुनै पनि फरक महसुस गर्न सेट गरिएको छ किनभने। प्रत्येक विमान आफ्नो वास्तविक समकक्ष रूपमा नजिक हुन गरिएको छ। केही टेक्स्चर Rikoooo गरेको वा परिमार्जन (विशेष गरी रात बनावट) एमिरेट्स संग रूपमा राम्ररी सकेसम्म मेल गर्न गरिएका छन्। वरिपरि B777-XXX काम उपयोगिता वाहनहरु कम्पनी रंग हो र सजिलै प्यानल "उपयोगिता" संग एनिमेटेड गर्न सकिन्छ।
सबै मोडेलहरू सानो घर मा घोषणा को एक प्रणाली (को 747-8F कार्गो बाहेक) र GPWS (भू निकटता चेतावनी प्रणाली) र एक 3D भर्चुअल ककपिट र एक 2D प्यानल सुसज्जित छन्। साथै एफएमसी, भू Handlin प्रणाली, AIRBUS र थप autoflare समावेश।
जब पहिलो तपाईँले तल (छैन Prepar 3D संग) जस्तै बारेमा बीस सन्देशहरू हुनेछ सुरु
कृपया आवश्यक सकेसम्म धेरै पटक कार्यान्वयन जवाफ।
आवश्यक रूपमा हो धेरै पटक जवाफ
तपाईं मात्र तपाईं पहिलो फ्लिट सुरु गर्दा यो एक पटक के गर्न छ।
पैक मा उपलब्ध मोडेल
एयरबस एक्एक्सएनएमएमएक्स- 330 अमीरात FSX र P3D एन 1999 entre एन सेवा
MOTEURS: आर आर ट्रेंट 772B
Capacité एन passagers:3कक्षाहरू 237 कहां एन2कक्षाहरू 278
एयरबस एक्एक्सएनएमएमएक्स- 340 अमीरात FSX र P3D
Capacité एन passagers:3कक्षाहरू 257
एयरबस एक्एक्सएनएमएमएक्स- 340 अमीरात FSX र P3D एन 2003 entre एन सेवा
MOTEURS: आर आर ट्रेंट 553
Capacité एन passagers:3कक्षाहरू 258
एयरबस एक्एक्सएनएमएमएक्स- 380 अमीरात र ला डोडेज FSX र P3D
Capacité passagers en:3कक्षा 489 (लामो-courrier très) एट 517 (लामो-courrier) एट2कक्षाहरु - 600 (moyen-courrier)
बोइङ 747-8F अमीरात कार्गो FSX र P3D
मुख्य repaint Rikoooo द्वारा
बोइङ 777-200 / ईआर अमीरात FSX र P3D एन 1996 entre एन सेवा
MOTEURS: आर आर ट्रेंट 877 (प्रकार एक) / आर आर 892 (प्रकार बी)
कन्फिगरेसन डे ला cabine:3कक्षाहरू 290 कहां2कक्षाहरू 346
बोइङ 777-200LR अमीरात FSX र P3D Entre एन सेवा एन 2007 EST l'संयुक्त राष्ट्र des avions les प्लस perfectionnés आउ Monde
Capacité passagers en:3कक्षाहरु - 266
बोइङ 777-300 अमीरात FSX र P3D एन possède 12 एमिरेट्स। आइपुग्छ dans ला Flotte एन 1999
MOTEURS: आर आर ट्रेंट 892
Capacité एन passagers:3कक्षाहरू 364
बोइङ 777-300ER अमीरात FSX र P3D आइपुग्छ dans ला Flotte एन 1999
Capacité एन passagers:3कक्षाहरू 364 / 358 / 354 कहां2कक्षाहरू 427 / 442
एयरबस एक्एक्सएनएमएमएक्स- 319 अमीरात कार्यकारी FSX र P3D
अब, एमिरेट्स एक अद्वितीय र लक्जरी निजी जेट सेवा प्रदान
Rikoooo द्वारा Repaint
भिडियो: रियल A319-115 ईमीरेट कार्यकारी